Ahoana no ahafahako matoky ny kalitaonao?
1. Ny milina rehetra dia hosedraina tsara amin'ny atrikasa QiangDi alohan'ny fandefasana.
2. Manome antoka iray taona izahay ho an'ny fitaovana rehetra sy ny serivisy aorian'ny fivarotana mandritra ny androm-piainany.
3. Afaka mizaha toetra ny fitaovanao izahay amin'ny alàlan'ny fitaovantsika alohan'ny hametrahana ny filaminana, mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny tetikasanao ny fitaovantsika.
4. Ny injenieranay dia handeha ho any amin'ny ozinanao hametraka sy hamono ny fitaovana, tsy hiverina izy ireo raha tsy afaka mamokatra vokatra mahay ireo fitaovana ireo.
Inona ny fahambonianao mampitaha amin'ireo mpamatsy hafa?
1. Ireo injenierantsika matihanina dia afaka manao ny vahaolana mety indrindra miorina amin'ny karazana akora, ny fahaiza-manao ary ny hafa takiana aminao.
2. Qiangdi dia manana injenieran'ny teknolojia fikarohana sy fampandrosoana maro manana traikefa 20 taona mahery, mahery vaika ny fahaizantsika R&D, afaka mampivelatra teknolojia vaovao 5-10 isan-taona izy io.
3. Manana mpanjifa goavambe marobe amin'ny agrochemical, fitaovana vaovao, sehatry ny pharmaceutika erak'izao tontolo izao izahay.
Serivisy inona no azontsika omena ho an'ny fametrahana milina sy ny fihazakazahana fitsapana? Inona ny politika fiantohana anay?
Valiny: Mandefa injeniera amin'ny tranokalan'ny mpanjifa izahay ary manolotra torolàlana sy fanaraha-maso ara-teknika eo an-toerana mandritra ny fametrahana ny masinina, ny fahazoan-dàlana ary ny fizahana. Manolotra fiantohana izahay 12 volana aorian'ny fametrahana na 18 volana aorian'ny fandefasana.
Manolotra serivisy mandritra ny androm-piainanay ho an'ny vokatra milina izahay aorian'ny fandefasana, ary hanaraka ny satan'ny milina miaraka amin'ny mpanjifanay aorian'ny fametrahana milina mahomby ao amin'ny ozin'ireo mpanjifanay.
Ahoana ny fampiofanana ny mpiasa momba ny fandidiana sy ny fikojakojana?
Valiny: Hanome sary an-tsipiriany momba ny fampianarana ara-teknika izahay mba hampianarana azy ireo amin'ny asa sy fikojakojana. Ho fanampin'izany, ny injenieranay ho an'ny fivorian'ny mpitari-dalana dia hampianatra ny mpiasao eo an-toerana.
Inona ny teny fandefasana atolotray anao?
Valiny: Afaka manolotra FOB, CIF, CFR sns miorina amin'ny fangatahanao izahay.
Inona ny fe-potoana andoavanao vola?
Aiza ny orinasa misy anao? Ahoana no fomba hitsidihako any?